Qaxootigii Giriigga ee mar u qaxay dalka Suuriya |
Qaxootigii Giriigga ee mar u qaxay dalka Suuriya
Iyadoo kumannaan qaxooti Suuriyiin u badan laga hortaagan yahay inay galaan dalka Giriigga si ay uga sii gudbaan qeybaha kale ee Yurub, ayaa waxaa jirta in hadda ka hor shacab Giriigga u dhashay oo ka barakacy dagaalkii labaad ee dunida si wanaagsan loogu soo dhaweeyay Suuriya.
Intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka, ciidamadii Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa qabsaday dalka Giriigga, waxaana waddankaasi ka barakacay tobanaan kun oo qof oo qaarkood ay qaxooti ku noqdeen dalal ay ka mid tahay Suuriya.
Giriiggii u qaxay Xaleb
Qaar kamid ah qaxootiga ka barakacay ciidamadii Naziga ayaa gaaray dalka Suuriya. Dadkaasi ayaa intooda badan ka cararay jasiiradda Chios ee u dhaw xeebaha Turkiga.
“Ciidamada Jarmalka ayaa jasiiradda qabsaday, gaajo xun ayaana na haysay. Qoyskeennu waxa uu ka koobnaa saddex qof,” ayay xusuusataa Marianthi Andreadi oo intaa ku dartay “waxaan si sharci darro ah ku galnay Turkiga, kadibna tareen ayaan u raacnay xerada qaxootiga ee Al Nayrab oo ku tiillay Xaleb (Suuriya).”
Professor Iakovos Michailidis oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Aristotle ee magaalada Thessaloniki ayaa sheegay in xerada Al Nayrab ay ahayd mid si kumeelgaar ah loogu hayo qaxootiga ka soo cararay dagaalkii labaad ee dunida, kuwaasoo markii dambe la geeyay dalalka kale ee Bariga Dhexe iyo xitaa Afrika.
Ioannis Stekas ayaa kamid ahaa Giriiggii u qaxay Bariga Dhexe kadibna la geeyay Afrika.
Waxa uu sharraxay sida uu aabihii u iibiyay hantidii ay lahayaeen kadib isaga, walaalkii iyo hooyadii uu ugu diray dibedda.
“Aaabahay waxa uu rabay in isaga iyo walaashey oo 10 jir ahayd ay naga daba yimaadaan, balse ciidamadii Jarmalka ayaa joojiyay in dadku u qaxaan Turkiga.” ayuu yiri Ioannis
Ioannis oo markaa lix jir ahaa iyo hooyadii ayaa gaaray qaaradda Afrika, waxaana ay markiii dambe ka gudbeen xeebaha Masar iyagoo gaaray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday Suuriya horraantii 2011, malaayiin qof oo dalkaasi dhashay ayaa magangelyo u doontay qaaradda Yurub, marinkooda ugu weynna waxa uu ahaa Giriigga.
Dabayaaqadii Febraayo ayay ahayd markii uu Turkiga dabciyay xayiraadda uu ku hayay qaxootiga Suuriyiinta u badan ee doonaya inay ka tallaabaan xuduudda Giriigga. Turkiga ayaa ka caraysan in Midowga Yurub uu ka taageeri waayay dagaalka uu ka wada gobolka Idlib ee ka dhanka ah ciidamada Bashar Al-Asad.
Tan iyo xilligaasi, kumannaan qaxooti Suuriyiin u badan ayaa ku xanniban xuduudda Giriigga, iyagoo loo diiddan yahay inay u gudbaan dalalka kale ee Yurub.